တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ ကပေးအပ်ချီးမြှင့်တဲ့ နာမည်ကျော် ဆုတစ်ဆုကို နိုင်ငံ တကာက အနုပညာရှင် တွေကို ဖြတ်ကျော်ပြီး ဆွတ်ခူးရရှိသွားခဲ့တဲ့ ဖွေးဖွေး – စှယျစုံသုတ
ဖွေးဖွေးက “Thank You untact 2020 Asia Model Awards in Seoul ! Thank You For choosing me !💪✨😍🤍 Covid 19 ကာလ ဖြစ်လို့ Seoul ကို မသွားရတော့ပဲ Asia Special Award ဆုကတော့ Korea ကလှမ်းပို့လိုက်လို့ ဖွေးလက်ထဲရောက်နေပါပြီရှင့်။
နောက်နေ့မှ ကျေးဇူးတင်စကားကို စာရှည်ရှည်ရေးပြီး အမှတ်တရပုံရိုက်ပြီးတင်တော့မယ်ရှင့်။ Heeeee so happyyyy ❄️❄️❄️❄️❄️☃️💃🏻😍🥰😍🥰😀ဖွေးကို ဒီ Career တလျှောက်လုံးချစ်ပေး အားပေးခဲ့ကြတဲ့ ဆရာ,မိဘ,ဖွေးကို ချစ်ပေးသူ Darlings, Oopsies တဦးတယောက်ချင်းစီ တိုင်း အတွက် ယူတဲ့ ဆုလေးပါရှင်…
ဖှေးဖှေးက “Thank You untact 2020 Asia Model Awards in Seoul ! Thank You For choosing me !💪✨😍🤍 Covid 19 ကာလ ဖွဈလို့ Seoul ကို မသှားရတော့ပဲ Asia Special Award ဆုကတော့ Korea ကလှမျးပို့လိုကျလို့ ဖှေးလကျထဲရောကျနပေါပွီရှငျ့။
နောကျနမှေ့ ကြေးဇူးတငျစကားကို စာရှညျရှညျရေးပွီး အမှတျတရပုံရိုကျပွီးတငျတော့မယျရှငျ့။ Heeeee so happyyyy ❄️❄️❄️❄️❄️☃️💃🏻😍🥰😍🥰😀ဖှေးကို ဒီ Career တလြှောကျလုံးခဈြပေး အားပေးခဲ့ကွတဲ့ ဆရာ,မိဘ,ဖှေးကို ခဈြပေးသူ Darlings, Oopsies တဦးတယောကျခငျြးစီ တိုငျး အတှကျ ယူတဲ့ ဆုလေးပါရှငျ…